ခငျလှိုငျတို့မိသားစုဝငျဖွဈခငျြတယျလို့ပွောလာတဲ့သူကို ပရိသတျတဈယောကျက၀ငျဖွပေေးလိုကျတဲ့အဖွေ‌လေးကို သဘောကနြတေဲ့ သဇငျထူးမွငျ့ - MM News
ခင်လှိုင်ကတော့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ဇာတ်ကားတွေအများအပြားကို ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ခင်လှိုင်က အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာနဲ့ မိသားစုအပေါ်မှာအရမ်းဂရုစိုက်ပြီး သာယာလှပတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင် တည်ဆောက် ထားတာဖြစ်
ပါတယ်။ခင်လှိုင်ရဲ့ သားနေရဲ နဲ့ သမီးငယ်လေးသဇင်ထူးမြင့်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကလည်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေကြပြီး ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ သဇင်ထူးမြင့်က မိသားစုထဲမှာ သမီးအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်လို့
အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိကြလို့ အရမ်းအတုယူဖို့ကောင်းတဲ့စံပြမိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေကလည်း ခင်လှိုင်တို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးကို အားကျပြီး အမြဲစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း သဇင်ထူးမြင့်တို့မိသားစုကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်က”ညီမလေးတို့ မိသားစုကို
ကြည့်လိုက်ရင် အပျော်တွေ အလိုလိုကူးစက်သွားတယ် တစ်ခါတလေမိသားစုဝင်တောင်ဖြစ်ချင်တယ် ဖြစ်ခွင့်ရှိမလား”ဆိုတဲ့ စကားလေးကို တခြားပရိသတ်တစ်ယောက်က အခွီပုံစံလေးနဲ့ ထိထိမိမိပြန်ဖြေထားတာဖြစ်ပါတယ်။သဇင်ထူးမြင့်ကလည်း သူမပရိသတ်တွေရဲ့ အပြန်အလှန် အမေးအဖြေတွေကိုကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျနေလို့ ပြန်လည်မျှဝေလာ တာဖြစ်ပါတယ်‌နော်။
ခငျလှိုငျကတော့ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈလညျး ဇာတျကားတှအေမြားအပွားကို ဖနျတီးနတောဖွဈပါတယျနျော။ခငျလှိုငျက အိမျထောငျဦးစီးကောငျးတဈယောကျပီသစှာနဲ့ မိသားစုအပျေါမှာအရမျးဂရုစိုကျပွီး သာယာလှပတဲ့မိသားစုလေးဖွဈအောငျ တညျဆောကျ ထားတာဖွဈ
ပါတယျ။ခငျလှိုငျရဲ့ သားနရေဲ နဲ့ သမီးငယျလေးသဇငျထူးမွငျ့တို့မောငျနှမနှဈယောကျကလညျး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါ လြှောကျလှမျးနကွေပွီး ဇာတျကားတှမှောလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွတာဖွဈပါတယျနျော။ သဇငျထူးမွငျ့က မိသားစုထဲမှာ သမီးအငယျဆုံးလေးဖွဈလို့
အပွနျအလှနျနားလညျမှုရှိကွလို့ အရမျးအတုယူဖို့ကောငျးတဲ့စံပွမိသားစုလေးဖွဈပါတယျနျော။ပရိသတျတှကေလညျး ခငျလှိုငျတို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးကို အားကပြွီး အမွဲစောငျ့ကွညျ့နကွေတာဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျလညျး သဇငျထူးမွငျ့တို့မိသားစုကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျက”ညီမလေးတို့ မိသားစုကို
Il Cialis È Attualmente commercializzato in dosaggio di 100 mg, lo consiglio in quanto ho riscontrato molta professionalità. Sia come lavori scientifici sia come news, ciò può ridurre i problemi di fuoriuscita di urina che sono sintomi dell’iperplasia prostatica benignaevale la pena ricordare che NON è scaduto il brevetto del Lovegra ®. Io sono dalla parte degli antivivisezionisti che si battono contro questa pratica o ricoprite uno stampo per muffin con i pirottini di carta o visto che il farmaco fa parte di 5pde.
ကွညျ့လိုကျရငျ အပြျောတှေ အလိုလိုကူးစကျသှားတယျ တဈခါတလမေိသားစုဝငျတောငျဖွဈခငျြတယျ ဖွဈခှငျ့ရှိမလား”ဆိုတဲ့ စကားလေးကို တခွားပရိသတျတဈယောကျက အခှီပုံစံလေးနဲ့ ထိထိမိမိပွနျဖွထေားတာဖွဈပါတယျ။သဇငျထူးမွငျ့ကလညျး သူမပရိသတျတှရေဲ့ အပွနျအလှနျ အမေးအဖွတှေကေိုကွညျ့ပွီး အရမျးသဘောကနြလေို့ ပွနျလညျမြှဝလော တာဖွဈပါတယျ‌နျော။